UTshazimpuzi 23, 2019 by I-Rudyard, Iimbono zizonke:
Ngaba ucinga ukuba uyaphila xa umlilo usendlini yakho yentaba emva kosuku olude? Okanye ngaba ukushushuluza kunye nabantwana ngaphezulu kwekhefu lobusika? Ungaqala ukusebenzela iphupha lakho namhlanje ngokutyala kwangoko kwipropathi yomhlaba. Nokuba uceba ukuthatha umhlala phantsi, ufuna indawo entsha yokuvakasha, okanye ufuna nje ukwenza utyalomali, iColorado yindawo entle onokukhetha kuyo - kwaye kungcono ukuya phambili ngoku ngelixa intengiso ikhula. Isixeko saseDenver, iindawo ezingqonge intaba, kunye neendawo ezikumantla e-Colorado zonke ziba nolwando olukhulu. Abanini bepropathi abatsha kwiminyaka nje embalwa edlulileyo sele bebone imbuyekezo emangalisayo kutyalo-mali.
Ayikho kuphela ukuba imarike yezindlu ishushu, kodwa iColorado ngokwayo nayo intle. I-Centennial State ibonelela ngendawo engenakuthelekiswa nanto kunye nezinto ezenziwayo zangaphandle zokwenza nangaliphi na ixesha lonyaka, ukusuka ekuhambeni intaba nasekufuduseni inkampu ukuya elunxwemeni nasekutyeni. Yiyo loo nto yindawo yeholide ethandwayo unyaka wonke! Ukuba ucinga ngokutyala imali kwipropathi esezintabeni kwindawo yaseColorado, Nazi izinto ezimbalwa ekufuneka uzigcine engqondweni:
Thatha isigqibo sokuba ufuna oluphi uhlobo lomhlaba.
Izinto zokuqala kuqala, kufuneka uchaze ukuba yeyiphi injongo yomhlaba wakho. Ngaba ufuna ipropathi enkulu ekhuselekileyo yomntu obaleke ngamanye amaxesha? Kuthekani ngesithuba sokuhluma, i-35+ i-acres ranchi? Okanye mhlawumbi ufuna nje ipropathi elula kufutshane namathambeka onokwakha ikhabhathi kuyo. Nokuba liphupha lakho linjani, ngoku lixesha lokuba ucace malunga nento oyifunayo.
Zilungiselele ukuhamba ngokukhawuleza.
Ukuba ubona ogqibeleleyo Indawo enkulu yentaba iyathengiswa eColorado, kuyakufuneka uthathe amanyathelo ngokukhawuleza ngenxa yohlobo olukhuphisanayo lwentengiso yezindlu. Kwindawo yemetro, ixesha eliphakathi ukuba uluhlu lwekhaya elitsha lwalusevenkileni ngaphambi kokuya kwisivumelwano yayiziintsuku ezine kuphela. Ewe kunjalo, oku kuyakwahluka kuxhomekeka ekubeni ufuna ukuthenga ntoni na eColorado, kodwa ngokubanzi, kuyacetyiswa ukulungiselela ngokwenza izinto ezifana nokwamkelwa kwangaphambili kobambiso.
Thetha nengcali kwilizwe laseColorado liyathengiswa.
Ekugqibeleni, kunzima ukwazi i-ins kunye nokuthengiswa kwemakethi ethile nokuba uhlala kwindawo - yeka ukuba uphuma ngaphandle kwedolophu. Ingcali inokukunceda ungafumani kuphela ipropathi efanelekileyo kwaye wenze umnikelo, kodwa baya kunceda ukukwazisa apha endleleni.
Ngaba ujonge ukuthenga iMpahla yeNtaba? Nantsi into ekufuneka ifundwe
I-Rudyard Aprili 23, 2019
Olu ngeno yafakwa kwi Ukuthengisa ngokuthengisa izindlu nomhlaba noqhotyosho Ukutyala imali kwiPropathi. Bookmark le Permalink.
Novemba 1, 2016 10 Amanyathelo okuTyalo-mali oluThengiweyo oluLula anokukunceda yeNzala Utyalomali malunga nokuthengiswa kwezindlu alukho nje ukuthenga ikhaya ukuze uhlale nosapho. Utyalomali kwaye ngenxa yoko, kufanelekile ukuba lube yinzuzo, okanye kungenjalo alunakulunga njengotyalo-mali. Ukutyala imali kwiarhente yokuthenga nopkuthengisa izindlu kuthengiswa ngakumbi kunesitokhwe kunye nebhondi. Kukho iindlela ezimbalwa zokutyala imali kwipropathi. Unokutsala imali kwiingxowa mali zotyalo mali, apho umphathi wengxowa mali eya kuthi alawule kutyalo-mali lwakho. Ke xa kuphela unyaka, ufumana ukusikwa kwaye ibhanki yotyalo mali ityale […] exhonyiweyo Ukuthengisa ngokuthengisa izindlu nomhlaba
Aprili 20, 2017 Iimpazamo ezintlanu kutyalo mali lweNdawo “Abantu bayayiqonda into yokuba iipropathi zezindlu nomhlaba, kutyalo-mali olufanelekileyo, kutyalo-mali olukhuselekileyo. Yeyona ndawo yotyalo-mali apho uqiniseke ukuba uza kuyibuyisela imali. ”-Bonnie Fitzgerald Ngaphandle kwamathandabuzo, utyalomali lwezindlu yenye yeendlela ezilungileyo zokufumana umvuzo kunye nengeniso. Ngelishwa, njengawo nawuphi na umsebenzi wezezimali, akukho siqinisekiso sokuba utyalomali lwakho alusilele kwaye uqinisekisiwe kukukunika inzuzo yezoqoqosho. Njengayo nayiphi na into […] exhonyiweyo Ukuthengisa ngokuthengisa izindlu nomhlaba
Ngamana 30, 2017 Iintsomi ze7 zeXabiso lokuNcitshiswa kweNtsika eziGcina kubadida abaTyalo-mali Ukuba uneshishini okanye ipropathi yotyalo-mali, ke ukuhla kwexabiso lentlawulo kungenye yeendlela zokuhlawula irhafu onelungelo kuzo. Uhlawule iimpahla ezaphathwa njengotyalo-mali, izakhiwo, izixhobo, ukubonelela, izithuthi ezinxulumene neshishini- kwaye ukuthoba ixabiso lelo asethi yindlela eqhelekileyo yokufumana izibonelelo zerhafu. Iipropathi ezincitshisiweyo zibhalwa ngohlobo lwenkcitho yonyaka yokuhla kwexabiso, inkcitho enokusetyenziswa esetyenziselwa irhafu yengeniso. Ngokubanzi, ukuhla kwexabiso kusetyenziselwa ukuvelisa […] exhonyiweyo Ukuthengisa ngokuthengisa izindlu nomhlaba
Februwari 15, 2017 Usebenza kanjani uXabiso ngeRhafu kunye nendlela abaThengisi bayo kwiPropathi Sonke singavuma - iipropathi zizotyalo-mali olufanelekileyo. Nokuba ipropathi yakho incinci njengendawo yokuhlala ephantsi okanye inkulu kakhulu njengezorhwebo kunye nepropathi yendawo yokuthengisa, zonke zivelisa umvuzo omkhulu onokuyazi kwangoko. Kodwa ngaba ubusazi ukuba kukho ukubakho kwemali efihliweyo "efihlakeleyo" ehleli kwipropathi yakho yotyalo-mali? Asithethi nje ngempahla onokuyithengisa okanye ngengeniso onokuyifumana kubaqeshi bakho. Sithetha ngerhafu esemthethweni Ukucutha onokuthi ungeva nge […] exhonyiweyo Ukuthengisa ngokuthengisa izindlu nomhlaba
Aprili 18, 2017 Izinto ze5 onokuzibanga kwiPropathi yakho yoTyalo-mali ukuze uQhime ugcino lweRhafu Xa sithetha ngokwenza imali kwipropathi yotyalo mali, zimbini izinto eziza kuqala engqondweni: ingeniso ngokuqeshisa ngaphandle kunye nzuzo yokuthengisa. Ezi ndlela ziqinisekileyo zomlilo zokuvelisa ukuhamba kwemali. Kodwa njengotyalomali, hlala ukhumbula ukuba esinye sezona sibonelelo sikhulu onokuzifumana zizibonelelo zerhafu. Hayi, isicwangciso esinamandla sokugcina irhafu asikho malunga nokuhlawula iirhafu ezimbalwa. Imalunga nokwandisa ukuhamba kwemali. Kuthetha ukuvumela wena kunye nabo ubathandayo bafumane imali ethe kratya […] exhonyiweyo Ukuthengisa ngokuthengisa izindlu nomhlaba
Matshi 31, 2017 Isiseko sokwehla kwesiseko Bonke abatyali mali beNdawo bafanele ukugcina engqondweni Umxholo wokuthoba ixabiso ulula: uthenge isofa elikhulu kwishishini lakho lasekhaya. Umzuzu ohleli kuwo, isiqwenga sefenitshala siphulukana nenzuzo ethile. Ukuhamba kwexesha kubangela ukuba isofa linxibe kwaye likrazuke, kwaye kunyaka ngamnye ongowakho kwaye uwasebenzise, ​​lixabisa ngaphantsi kunokuba lalinjalo. Ukulinganisa ukunciphisa ukuxabiseka kweasethi yaziwa ngokuba kukuhla kwexabiso. Ukuhla kwexabiso yindlela yokubalwa kwemali yokusasaza iindleko ezirekhodiweyo ze-asethi ebonakalayo okanye ebonakalayo ngaphezulu kobomi bayo obuluncedo. […] exhonyiweyo Ukuthengisa ngokuthengisa izindlu nomhlaba
Septemba 27, 2016 Ukufumana indawo engummelwane ilungile kwisilwanyana sakho sasekhaya Ke unezihlobo ezimbalwa zohlobo lobuboya kwaye unexhala elincinci malunga nentuthuzelo yabo xa ufumana indlu entsha. Yinto yemvelo ukuba izinja kunye neekati zingenako ukuziqhelanisa nazo zonke iindawo ezimi kakuhle njengabantu. Abantu banokuhlala beguqula izinto kwiindawo ezingqongileyo ukuba zikwenze kube lula, zizilwanyana ezingenakukwazi. Konke konke, indawo enomceli mngeni ayenzi indawo yokuhlala esemagqabini enomhlaba. Njengomnini-pet onenkathalo, kufuneka ukhangele indawo enobuhlobo bezilwanyana zasekhaya, xa ufumana […] exhonyiweyo Ukuthengisa ngokuthengisa izindlu nomhlaba